आफ्नै कोखबाट जन्मेका दुई बच्चाको हत्या गरी आफै आत्महत्या गर्ने यी आमा ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»विश्व»आफ्नै कोखबाट जन्मेका दुई बच्चाको हत्या गरी आफै आत्महत्या गर्ने यी आमा !
आफ्नै कोखबाट जन्मेका दुई बच्चाको हत्या गरी आफै आत्महत्या गर्ने यी आमा !
By मनिषा थापा on ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ११:३१ विश्व
पिएनपिखबर, भक्तपुर : भारतको केट थाना क्षेत्रमा बिहिबार बिहान एक महिलाले आफ्नो दुई बच्चाको हत्या गरी आफुले पनि आत्मा हत्या गरेकी छिन्। परिवारको अनुसार ती महिला विगत दुई वर्ष देखि नै डिप्रेशनको शिकार थिइन्। पुलिसले शवलाई कब्जामा लिई पोस्टमॉर्टमको लागि पठाएको छ।
मृतक शशि सिंह आफ्नो सासु-ससुरा र दुई बच्चासँग बस्ने गर्थिन। उनको छोरा ६ वर्षको र ९ वर्षको छोरी थियो। उनको ससुरा सुरेश सिंह सिंचाई विभागमा काम गर्दथे।
मृतकको देवर भन्छन,’मेरो ठुलो दाई संतोष सिंह दुई वर्ष अघि नन्दा नगर क्रसिंगमा ट्रेनले किचेर मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि भाउजुलाई डिप्रेसन भयो। उनि निकै चिन्तित थिइन् तर यस्तो कदम उठाउँछिन् भनेर सोचेको थिएन। बुधबार राती सब ठिक थियो। भाउजुले खानामा छोले-भटूरे बनाएका थिए। डिनर पछि आफ्नो सन्तानलाई लिएर सुत्नको लागि गईन।’
रिपोर्ट्को अनुसार शशिले पहिला आफ्नो दुबै बच्चालाई घाँटी थिचेर मारिन। त्यसपछि उनी आफै पंखामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्।
उनको सासु भन्छिन,’बुहारी सधै चाँडो उठ्ने गर्थिन तर बिहिबार उनी धेरै समयसम्म पनि बाहिर आइनन। पहिला हामीले ढोकाबाट बोलायौ तर उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ढोका फुट्यायौ। कोठाभित्र दुई बच्चा पलंगमा थिए भने शशि पंखामा झुण्डीरहेकी थिइन्।’
श्रीमानको निधनपछि यी महिला डिप्रेसनमा रहेको परिवारजनले बयान दिएका छन् र घटनाको अझै छानविन गर्ने त्यहाँको सीओंले बताएका छन् ।